I-China i-SPAS-100 ezenzekelayo iyakwazi ukuthunga umatshini kubavelisi kunye nabathengisi | Oomatshini beShipu
Zimbini iimodeli zolu oluzenzekelayo olunokutywina umatshini, olunye luhlobo oluqhelekileyo, ngaphandle kokukhuselwa ngothuli, isantya sokutywina silungisiwe; enye uhlobo isantya esiphezulu, kunye nokukhuselwa uthuli, isantya adjustable yi frequency inverter.
Ngamaqela amabini (amane) emiqolo yokuthunga, iinkonkxa zimile ngaphandle kokujikeleza ngelixa imiqolo yokuthunga ijikeleza ngesantya esiphezulu ngexesha lokuthunga;
Iitoti zokutsala iringi ezahlukileyo zinokuthungwa ngokutshintsha izinto ezinje nge-die-pressing die, inokucofa idiski kunye nesixhobo sokulahla isiciko;
Lo matshini uzenzekelayo kwaye usebenza ngokulula ngeVVVF, ulawulo lwePLC kunye nepaneli yokubamba yomatshini womntu.
Ulawulo lwe-can-lid interlock: isiciko esihambelanayo sinikwa kuphela xa kukho itoti, kwaye akukho sivalo singenakho;
Umatshini uza kuyeka kwimeko yokungabikho kwesivalo: unokumisa ngokuzenzekelayo xa kungekho sivalo siwisiweyo sisixhobo sokulahla isiciko ukuthintela ukubanjwa kwesiciko sokucinezela kufa ngetoti kunye nokulimala kwendlela yokuthunga;
Indlela yokuthunga iqhutywa ngebhanti ehambelanayo, evumela ukugcinwa okulula kunye nengxolo ephantsi;
Isithuthi esiguqukayo ngokuqhubekayo silula kubume kwaye kulula ukusebenza nokugcina;
Izindlu zangaphandle kunye neendawo eziphambili zenziwe ngentsimbi engenasici engama-304 ukuhlangabezana neemfuno zezempilo zokutya kunye neziyobisi.
Umgangatho: iitoti ezingama-35 / imizuzu. (Isantya esisigxina)
Isantya esiphezulu: 30-50 iinkonkxa / min (isantya adjustable yi frequency inverter)
Ngaba ubukhulu: φ52.5-φ100mm, φ83-φ127mm
Ngaba ukuphakama: 60-190mm
(Iinkcukacha ezizodwa zingenziwa ngokwezifiso.)
Uxinzelelo lokusebenza (umoya oxinzelelweyo)
About0.4Mpa Malunga ne-100L / min
Egqithileyo I-Pin Rotor Machine Izibonelelo-SPCH
Okulandelayo: Umgubo wobisi ogqityiweyo unokugcwalisa kunye nomgca wokugoba china manufacturer
Ubisi Powder Umshini Ngaba Ukuthunga Chamber China Ma ...
Oluzenzekelayo Umshini yokuLungisa Machine kunye nitrogen ...